Somaliland oo ka laabtay diidmadii qaxootiga ka imaanayey Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka Dib u dejinta maamulka Somaliland, Cali Siciid Raygal, ayaa ku dhawaaqay in dib loo fasaxay qaxoontiga u dhashay koonfurta Soomaaliya kadib markii dhawaan maamulkaasi mamnuucday qaxoontiga koonfurta u dhashay ee Somaliland soo gaaraya.
Wasiirka ayaa sheegay in hadda laga bilaabo ay sidii caadiga ahayd u iman doonaan doonyaha iyo maraakiibta sida qaxoontiga Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha gudaha oo ay weheliyaan wasiiro kale ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay inaan Somaliland qaabili doonin dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya ee ka soo cararaya dagaalka Yemen.
Waxa uu sheegay in hay’addaha ku shaqada leh qaxoontiga iyo wadamada caalamku diideen inay taakuleeyaan dadka islamarkaana Somaliland aanay u taag hayn.
Haseyeeshee, Wasiir Cali Siciid Raygal ayaa sheegay in hay’adda qaxoontiga aduunka ee UNHCR iyo Hay’adda socdaalka dunidu soo gaarsiiyeen qoraalo rasmi ah oo ay ku ballan qaadeen inay dadkaasi taakulaynayaan islamarkaana kafaalo qaadayaan inay gaarsiiyaan degaanada koonfureed ee ay u dhasheen.
Xukumadda Somaliland ayaa lagu dhaliilay qaxoonti Soomaali ah oo loo diiday inay soo galaan dekedda Berbera muddo kooban.
Muuqaal laga duubay dadkaasi ayaa muujinayay arxan darro kadib markii hooyooyin caruur wataa ku muusanaabeen inay badda isku tuurayaan haddii aan la dejin, waxaana arrintaasi ka soo horjeestay shacabka Somaliland oo khibrad u leh dhibaatada qaxoontiga.